Steam: Bulshada, Bakhaarka iyo Macaamiilka Ciyaarta ee GNU / Linux | Laga soo bilaabo Linux
Kadib markaad dhex martay codsiyada ciyaarta fiidiyowga ee GNU / Linux, sida gamehub, Itch.io y Lutris, waa macquul in aan la joojin faallooyinka ku saabsan macluumaadka la cusbooneysiiyay ee ku saabsan sida ugu fiican ee loo yaqaan, loo isticmaalo loona dhammaystiro madal (Community / Store / Customer) waayo, ciyaaraha GNU / Linux, taas oo ah, Steam.
Haa Steam waxaa loogu talagalay kuwa badan, kan ugu fiican dhammaantood aaladaha dhijitaalka ah ee fiidiyoowga fiidiyoowga ah. Iskusoo wada duuboo, ka mid noqoshada shirkada caanka ah ee adduunka, oo horumarisa ciyaaraha iyo qalabka ciyaaraha, ayaa loo yaqaan Madax.
Thanks to taageeradaas, Steam maanta waa meel ay isticmaaleyaasha (xubnaha / macaamiisha) awoodaan iibso oo soo dejiso tiro badan oo ciyaaro ah, oo ka socda soosaarayaal kala duwan (barnaamijyada softiweerka), oo laga heli karo adiga buugga weyn ee sii kordhaya. Intaa waxaa dheer, inaad ku raaxeysato adeegyo kale iyo faa'iidooyin.
1.1 Sidee buu u shaqeeyaa Steam?
1.2 Sidee loo rakibaa loona adeegsadaa Steam GNU / Linux?
Sidee buu u shaqeeyaa Steam?
Faham oo isticmaal Steam waa wax fudud. Marka laga reebo isticmaalka ciyaaraha bilaashka ah, bilaash ama furan, ee la bixin karo iyada oo aan xadidneyn, asal ahaan, markaad ka iibsaneyso ciyaar dhexdeeda, waxaad iibsaneysid waa rukumo, taas oo ah, hal rukumis (shaqsi ah iyo mid aan la wareejin karin) marin looga heli karo koontadaada.
Steam waligiis ma siinayo nuqul jireed ciyaar kasta. In kastoo, ay u oggolaaneyso abuuritaanka nuqul ka mid ah waxyaabaha jirka laga duubo ka dib markii la soo dejiyo. Ciyaarta had iyo jeer ku xiran koontada isticmaaleha, si loogu oggolaado inay soo dejiyaan, ku rakibaan una adeegsadaan inta jeer ee ay u arkaan inay lagama maarmaan tahay, iyo kumbuyuutarrada ay u baahan yihiin, iyadoon wax xaddidan lahayn, marka laga reebo inay ka bilaabaan hal kombiyuutar markiiba, bartamaha koontadaada
Uumi ayaa laga heli karaa adiga degel rasmi ah, halkaasoo waxyaabo badan ka mid ah, soo booqde iska qori karo inuu ka mid noqdo Bulshada, booqo dukaanka si aad u iibsato ama / ama u soo dejiso ciyaaraha, oo aad u soo dejiso Macaamiisha ciyaarta, sida ay u kala Nidaamka hawlgalka ku rakiban kombuyuutarkaaga.
Sidee loo rakibaa loona adeegsadaa Steam GNU / Linux?
Waqtiga hadda, Macaamiisha ciyaarta uumiga waxaa laga heli karaa .deb format, gudaha 1.0.0.61 version. Kahor soo dejinta iyo ku rakibidda a Nidaamka Howlgalka la jaan qaadi kara, tusaale ahaan kiiskeenna, a MX Linux 19.1, qaybinta ku saleysan DEBIAN 10.3, waxaa lagugula talinayaa inaad iska diiwaangeliso websaydhka marka hore. Nidaamku waa sahlan yahay waana sida soo socota:
Burcad Websaydh Rasmi ah diiwaangelinta koontada isticmaalaha iyo / ama soo galida.
Soo dejiso oo rakib macaamiisha Ciyaaraha Steam.
Bilaabistii ugu horreysay ee Macaamilka Ciyaaraha Steam cusbooneysiintaada iyo qaabeynta ugu dambeysa.
Adeegsiga Bakhaarka loogu talagalay rakibidda iyo socodsiinta cayaaraha la heli karo.
Sida aad arki karto, labadaba diiwaangelinta ku jirta Madal uumi, sida soo dejiso, rakibid, qaabeyn iyo adeegsi qaar ka mid ah ciyaaraha bilaashka ah (Bilaash-ciyaar) ama lacag la bixiyo (ganacsi) Ma aha wax adag oo dhan, iyo asal ahaan wax walba waxay ku xirnaan doonaan qalabka kombiyuutarka la isticmaalay iyo iswaafajinta ay GNU / Linux Distro in la taageero Steam iyo shuruudihiisa u gaarka ah, iyo shuruudaha ciyaaraha la isticmaali doono.
Nasasho, midkoodna Steam, gamehub, Itch.io y Lutris, ama codsiyo kale oo loogu talagalay cayaaraha fiidiyowga sida emulators retro console ama shaqsi desktop desktop ah, waxaa la muujiyay in hadda GNU / Linux waa heer sare Nidaamka Howlgalka Gamer leh heer aad ugu dhow tan Windows iyo MacOS.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Steam» heer sare ah madal loogu talagalay cayaaraha oo dhan hal, tan iyo markii ay tahay a Bulshada, Bakhaarka iyo Macaamilka cayaaraha qaabeynta badan, oo leh buug aad u fiican, aad u weyn oo sii kordhaya ee «Juegos compatibles» Anaga ahaan Nidaamyada Hawlgalka Bilaashka ah iyo Furfuran, noqo mid dan weyn iyo dan u leh, dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Steam: Bulshada, Bakhaarka iyo Macaamiilka Ciyaarta ee GNU / Linux
Haddii aad iibiso barnaamijyo, waa inaad ku taageertaa barnaamijyada Proton
Waan fahansanahay hadii aad ku iibsato softiweer Steam, waad ka dhex heli kartaa, marka hadaan Linux ku jirno waxay u badan tahay haa, Proton waxaa loo isticmaalaa inuu ku taageero.
Wuxuu la yimaadaa ikhtiyaarka lagu kiciyo Proton